फेसबुकमा भिडियोहरू कसरी अपलोड गर्ने: कम्प्युटरबाट र अनुप्रयोगमा ग्याजेट समाचार
भिडियो एक ढाँचा हो कि सामाजिक नेटवर्क मा धेरै उपस्थिति प्राप्त गरीरहेको छ। फेसबुकले पनि भिडियोमा ठूलो शर्त लगाएको छ, कि धेरै प्रयोगकर्ताहरू कहिलेकाँही डाउनलोड गर्न चाहानुहुन्छ। यद्यपि ती प्रयोगकर्ताहरूको लागि जसले सामाजिक नेटवर्कमा आफ्नो पहिलो कदमहरू चालेको छ, तिनीहरूलाई भिडियोमा अपलोड गर्ने तरिकाबाट उनीहरूले चिन्दैनन्।
तसर्थ, तल हामी तपाईंलाई देखाउँदछौं जुन तरीकाले तपाईं फेसबुकमा भिडियो अपलोड गर्न सक्नुहुनेछ। दुबै सामाजिक नेटवर्कको कम्प्युटर संस्करण र स्मार्टफोनको लागि यसको संस्करणमा। ताकि कुनै पनि प्रयोगकर्ताले कुनै पनि समयमा सजीलो सामाजिक नेटवर्कमा भिडियोहरू अपलोड गर्न सक्षम हुनेछ।
1 फेसबुकमा भिडियोहरू अपलोड गर्नका लागि आवश्यकताहरू
2 तपाईंको कम्प्युटरमा फेसबुकमा भिडियो अपलोड गर्नुहोस्
3 अनुप्रयोगबाट फेसबुकमा भिडियोहरू अपलोड गर्नुहोस्
फेसबुकमा भिडियोहरू अपलोड गर्नका लागि आवश्यकताहरू
सामाजिक नेटवर्कमा एक भिडियो अपलोड गर्नु अघि, यो जान्नु महत्त्वपूर्ण छ कि त्यहाँ केहि शर्तहरू छन्। फेसबुकले नियमहरूको एक श्रृंखला स्थापना गर्दछ जुन अपलोड गरिएको भिडियोहरूले अनुपालन गर्नुपर्नेछ। अनुमति दिइएको सामग्रीको बारेमा मात्र होईन, यो पहिले नै थाहा छ कि यसको नियमहरू अनुसार अश्लिल वा हिंसात्मक केही पनि सामाजिक नेटवर्कमा अपलोड गर्न सकिदैन। तर तपाईंले यो पनि ध्यानमा राख्नु पर्दछ कि भिडियोहरू अपलोड गर्दा त्यहाँ अधिकतम तौल र अवधि हुन्छ।
सामाजिक नेटवर्कमा अपलोड गरिएको कुनै पनि भिडियो १,०२ MB MB भन्दा ठूलो हुन सक्दैन। यो तौल को मामला मा सीमा हो, त्यसैले यो ध्यान मा लिनु पर्छ। अरु के छ त, भिडियोमा हुन सक्ने अधिकतम लम्बाई २० मिनेट हो। अर्को महत्त्वपूर्ण विचार यो छ कि सिफारिश गरिएको छ कि भिडियोहरू १ 16: or वा :9: १ in मा हुनुपर्छ, रुचाइएको छवि ढाँचाको रूपमा, पर्दा राम्रोसँग फिट हुन। एक पटक फेसबुक द्वारा लगाईएको सर्तहरू ज्ञात भएपछि, हामी सामाजिक नेटवर्कमा भिडियो अपलोड गर्न तयार छौं। हामीले कुन चरणहरू अनुसरण गर्नुपर्दछ?
तपाईंको कम्प्युटरमा फेसबुकमा भिडियो अपलोड गर्नुहोस्
भिडियो अपलोड गर्दा धेरै प्रयोगकर्ताहरूले सामाजिक नेटवर्कको कम्प्युटर संस्करण प्रयोग गर्न रुचाउँदछन्। विशेष गरी जब यो भिडियो अपलोड गर्न छिटो छ, जुन प्राय: ठुलो हुन्छ, कम्प्युटरमा होम इन्टर्नेट जडानको साथ। त्यसकारण, हामीले कम्प्युटरमा ब्राउजर प्रयोग गरेर फेसबुक प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ र हामी वेबमा हाम्रो खातामा दर्ता गर्दछौं। यस तरिकाले, हामी पहिले नै सामाजिक नेटवर्क को होम पेज मा छौं।
मध्य भागमा हामी एउटा खाली बक्स पाउँछौं, जसमा यसले भन्छ कि तपाईं के सोचिरहनु भएको छ? हामीले यसमा क्लिक गर्नुपर्नेछ, ता कि यो ठूलो हुन्छ र केहि विकल्पहरू तल तल देखा पर्दछ। ती मध्ये एक तस्बिर / भिडियो हो, जसमा हामीले क्लिक गर्नुपर्दछ। यस तरिकाले, एक फोल्डर खुल्नेछ जसले हामीलाई अनुमति दिन्छ हामी कम्प्युटरबाट अपलोड गर्न चाहेको भिडियो छनौट गर्नुहोस्। त्यसो भए, हामीले चाहेको स्थानमा भिडियो खोज्नु पर्छ।
त्यसो भए, जब हामीले भिडियो छनौट गर्‍यौं, यसले यसलाई सामाजिक नेटवर्कमा अपलोड गर्न सुरू गर्दछ। यो लोड हुन लिने समय भिडियोको तौलमा कति निर्भर गर्दछ। त्यसैले हामीले त्यसलाई ध्यानमा राख्नु पर्छ प्रक्रिया केहि मिनेट लिन सक्दछ सम्पन्न गर्न। भिडियोको साथ यो केहि पाठ वा ट्याग व्यक्ति राख्नु सम्भव छ, जब हामी फेसबुकमा प्रकाशन अपलोड गर्न चाहानुहुन्छ। प्रक्रियाले यस अर्थमा परिवर्तन प्रस्तुत गर्दैन।
जब भिडियोको अपलोड पूरा भयो, हामी यसको बक्समा थम्बनेल देख्न सक्षम हुनेछौं। यो संकेत हो कि भिडियो पहिले नै अपलोड गरिएको छ र प्रकाशित हुनको लागि तयार छ। यदि हामीले पहिले नै भनिएको प्रकाशनको बारेमा सबै कन्फिगर गरेका छौं, र हामी विचार गर्दछौं कि सबै प्रकाशित हुन तयार छ, तब पहिले नै हामी निलो प्रकाशित बटन क्लिक गर्न सक्छौं। त्यसैले यो भिडियो स्थायी रूपमा फेसबुकमा अपलोड गरिनेछ र सामाजिक नेटवर्कमा हाम्रो सम्पर्कहरूले हाम्रो प्रोफाइलमा यसलाई हेर्न सक्षम हुनेछ।
अनुप्रयोगबाट फेसबुकमा भिडियोहरू अपलोड गर्नुहोस्
अर्कोतर्फ, हामी एन्ड्रोइड वा आईओएस को लागी अनुप्रयोग बाट भिडियो अपलोड गर्न सक्छौं। यो अर्को विधि हो, तर छोटो अवधिको लाइट भिडियोहरू अपलोड गर्न चाहेको मामिलामा यो हाम्रो लागि बढी सुविधाजनक हुन्छ। किनभने लामो भिडियोहरूको लागि एउटा उल्लेखनीय तौल छ, कम्प्युटर संस्करण प्रयोग गर्नु राम्रो हो जुन यस केसमा छिटो हुनेछ। जे भए पनि, हामीले हाम्रो स्मार्टफोनमा पहिले अनुप्रयोग खोल्नु पर्छ।
चरणहरू फेसबुकको डेस्कटप संस्करणको तुलनामा धेरै परिवर्तन हुँदैन। जब हामी अनुप्रयोग भित्र हुन्छौं, हामीले "तपाइँ के सोचिरहनु भएको छ" बाकसमा क्लिक गर्नुपर्दछ र त्यसपछि फोटो / भिडियो विकल्प छनौट गर्नुपर्नेछ भिडियो अपलोडको प्रक्रिया सुरू गर्न। गर्न पहिलो कुरा कुन भिडियो छ जुन तपाइँ अपलोड गर्न चाहानुहुन्छ छनौट गर्नु हो। फोन ग्यालरी खुल्नेछ, जहाँ तपाईं अपलोड गर्न चाहानुभएको एउटा छनौट गर्न सक्नुहुन्छ। यद्यपि तपाईले फोनमा यसको स्थान लाई ध्यान दिएर भिडियो छनौट गर्न सक्नुहुन्छ। एक पटक चयन भएपछि, यो भिडियो अपलोड गर्न सुरू हुनेछ।
अघिल्लो केसमा जस्तै, यसको वजनको आधारमा, सामाजिक नेटवर्कमा भनिएको भिडियोको अपलोड पूरा गर्न यसले कम वा कम समय लिने छ। तपाईं भिडियोको साथ केही पाठ थप्न छनौट गर्न सक्नुहुन्छ, साथै साथै अन्य व्यक्तिहरू ट्याग गर्न चाहनुहुन्छ भने। जब यो पूर्ण हुन्छ र भिडियो अपलोड भएको छ, भिडियोको थम्बनेल स्क्रीनमा देखिनेछ। तसर्थ, प्रकाशित बटनमा क्लिक गर्नुहोस्, त्यसो भने कि भिडियो फेसबुक मा प्रत्येकको खातामा अपलोड गरिएको छ। प्रक्रिया सरल छ र तपाईंले कम्प्युटर संस्करणमा अनुसरण गर्नु पर्ने समान चरणहरू अनुसरण गर्नुपर्दछ।
किनभने भिडियो त्यस्तो चीज हो जुन धेरै तौल गर्दछ र त्यो फेसबुक अनुप्रयोग सबैभन्दा मोबाइल डाटा प्रयोगकर्ताहरू मध्ये एक हो भनेर चिनिन्छ, यो WiFi जडान प्रयोग गरेर भिडियो अपलोड गर्न उत्तम छ। अन्यथा देखि, यसको मतलब यो हुन सक्छ कि डाटा दर को एक महत्वपूर्ण हिस्सा समाप्त भयो। विशेष गरी यो अवस्थामा सीमित दर रहेको छ, जुन प्रयोगकर्ताहरूको विशाल बहुमतमा रहेको छ। यसैले यो याद राख्नु महत्वपूर्ण छ कि अनुप्रयोग प्रयोग गरेर भिडियो अपलोड गर्दा।
लेखको पूर्ण मार्ग: ग्याजेट समाचार » सामान्य » सामाजिक नेटवर्क » कसरी फेसबुकमा भिडियो अपलोड गर्ने